Otu esi atụgharị Oneplus 2 gị na Linux mobile na Ubuntu Touch (dị mfe) | Site na Linux
Otu esi agbanye Oneplus 2 gị na Linux mobile na Ubuntu Touch (dị mfe)
Isaac | | android, Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
Ntọala UBports, German ọrụ ebere na-akpata ọrụ a, na-aga n'ihu na-eme ka ahụmịhe ahụ dịkwuo mma ma na-eme ka ọ dịrị ndị ọrụ chọrọ ịwụnye sistemụ arụmọrụ a na ngwaọrụ gam akporo ha Ihe akaebe nke a bụ nke ọhụrụ UBports Installer maka Ubuntu Touch ha weputara. Kpọmkwem, ọ ga-adịrị ndị nwere OnePlus 2 mfe, na-enwe ike ịgbanwe ọnụ a ka ọ bụrụ Linux mobile mfe.
You maraworị na Ubuntu Touch bụ ezigbo sistemụ arụmọrụ na-ekwe nkwa, yana nke ntụgharị ahụ nke onye ọ bụla na-ekwu maka ya nwere ike ịbịa ma nke ahụ mechara dị ka echefuru ya. O di nwute, Canonical kwụsịrị ọrụ a afọ ndị gara aga, mana ntọala a anabatawo ya ma debe ya ndụ, yana ime ka mbugharị iOS ma ọ bụ gam akporo dị mfe karị.
Ugbu a enwere UBports Installer ma ọ bụ Ubuntu Touch Installer ị nwere ike iwunye sistemụ arụmọrụ n'ime ọ bụla na-akwado ngwaọrụ na di ntakiri mgbalị, na-enweghị ịgagharị na ịwụnye ROM ọhụrụ site n'aka na itinye ihe egwu ma ọ bụrụ na ihe agahie n'oge usoro ahụ yana na ọ ga-abaghị uru n'ihi na ị maghị nke ọma etu esi eme ihe.
Enwere ike ime usoro a nke ọma site na Windows PC, MacOS ma ọ bụ site na GNU / Linux. Don'tdịghị mkpa usoro a kapịrị ọnụ ka ọ na-arụ ọrụ nke ọma na nyiwe ndị a.
Kemgbe UBports Installer 0.7.4-beta nke ewepụtara ọnwa ole na ole gara aga, enwere nnukwu mgbanwe na ndozi. Otu n'ime ihe ndị kacha ewu ewu bụ ịgụnye OnePlus 2 smartphones n'etiti ndepụta akwadoro. Yabụ, ọ bụrụ na ịnwere otu ụdị ndị a ma chọọ inye ya ndụ nke abụọ na Linux, ị nwere ike ịgbaso usoro ndị a iji wụnye Ubuntu Touch na ya mfe.
Nke mbu bu budata ụdị nkwụsi ike kachasị ọhụrụ dị, nke bụ 0.8.7 n'oge a na-ede edemede a. Iji budata ụdị kachasị ọhụrụ n'ebe ahụ, sọsọ soro usoro ndị a:
Nweta adreesị a na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị.
Ala na pịa bọtịnụ ngwugwu ị chọrọ ibudata na UBports Installer, ma maka Windows, macOS ma ọ bụ maka Linux distro gị. N'ihe banyere Linux, ị nwere nchịkọta DEB, Snap, ma ọ bụ Universal AppImage, dabere na mmasị gị.
Ozugbo ibudata ngwugwu ahụ, ịnwere ike wụnye ngwugwu a dị ka ị ga-eji ngwugwu ọ bụla nke njirimara ndị ahụ. Dị ka ọmụmaatụ:
Nwere ike mepee DEB na Gdebi iji wụnye ya na eserese ma ọ bụ jiri njikwa ngwugwu site na iwu iwu.
Maka AppImage, nye ya ikikere ma pịa ya ugboro abụọ.
Ozugbo awụnyere ya na distro gị, ihe ọzọ ga - eso ndị a nzọụkwụ ndị ọzọ:
Na-agba ọsọ UBports nrụnye.
Ugbu a, jikọọ OnePlus 2 (gbanyụọ) na PC gị site na eriri USB.
Na UBports Installer, pịa Họrọ Ngwaọrụ na aka.
Na windo ọhụrụ nke gosipụtara, họrọ mkpanaka gị nke ịchọrọ iji wụnye Ubuntu Touch na nke ị ka jikọọ, na nke a OnePlus 2.
Ugbu a, na ihuenyo na-esote, ị nwere ike ịhapụ data dịka ọ dị ma ọ bụ gbanwee ọwa ahụ, ya bụ, OTA nke ị na-aga ịwụnye ma ọ bụ mbipute. Dịka ọmụmaatụ, OTA-15 ma ọ bụ ụdị ọhụụ ọ bụla ma ọ bụrụ na ịchọrọ.
Ozugbo ịmechara mgbanwe ị chọrọ, pịa wụnye iji wụnye usoro.
Ọ ga - ezitere gị ozi ịdọ aka na ntị, ị ga - eme ya Gaa n'ihu gaa n’ihu
Ọ ga-ajụ gị maka paswọọdụ onye nchịkwa nke usoro gị ị ga-abanye iji gaa n'ihu.
Pịa OK iso.
Ugbu a, pịa bọtịnụ ike sekọnd ole na ole ruo mgbe ị hụrụ ihuenyo mmalite.
Ga-ahụ na a ozi na-egosi na PC gị na ihuenyo na ị ga- kwenye.
Ọ bụrụ na ihe niile emeela nke ọma, ị ga-ahụ otu ụzọ dị iche iche si hụ na OnePlus 2 gị na UBports Installer. Ikwesighi ime ihe ọ bụla, naanị esperar.
Mgbe ahụ OnePlus 2 gị malitegharia na ihuenyo nnabata nke Ubuntu Touch.
Ọ dị njikere!
Ugbu a, ị ga-ekpori ndụ Ubuntu gị na ọnụ gị ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Otu esi agbanye Oneplus 2 gị na Linux mobile na Ubuntu Touch (dị mfe)
Ndewo, emeela m nwụnye dịka akọwapụtara n'elu na One Plus 2 smartphone site na laptọọpụ ya na Arch Linux na nwụnye dị mfe ma dịkwa oke ọsọ.
Daalụ maka isiokwu
PeerTube 3.1 bịarutere na ndozi transcoding, interface na ndị ọzọ
MOS-P1: Inyocha Microsoft Open Source - Nkebi 1